GC warning :Out of Memory ! Returning NIL! error တက်နေလို့ပါ — MYSTERY ZILLION
GC warning :Out of Memory ! Returning NIL! error တက်နေလို့ပါ
June 2009 edited June 2009 in Open Source
ကျွှန်တော် FC7 မှာ Directory service run ထားပါတယ်
administration console ကို၀င်တဲ့အခါမှာ အခုလို့ပြသနာတက်ပါတယ်
GC warning :Out of Memory ! Returning NIL!
ကျွှန်တော် google မှာရှာကြည့်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါတယ်
phyominwaii wrote: »
Google မှာရှာကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ ဘာတွေလုပ်ကြည့်ပြီးပြီလဲ ခင်ဗျာ ?
HTTP server နဲ့ JRE တော့ installed ထားပြီးပြီလား ဗျာ ?
JRE installed ပြီးရင်လဲ /etc/alternative ထဲက java soft link ကို JRE အသစ်ကိုပြန် point လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်
#ln -s /your/new/jre/path/bin/java /etc/alternative/java
တစ်ခုပြောဖို့မေ့သွားတယ်။ အမှန်က JRE and HTTP က prerequisites ဗျ။
ကျွှန်တော် ချက်ချင်းreply မပြန်နိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါဗျာ.....
ကျွှန်တော် အစ်ကိုပြောတာတွေ check လုပ်ပြီးပါပြီ..
[[email protected] /]# httpd -v
[[email protected] /]# java -version
[[email protected] fedora-ds]# ln -s /java /etc/alternatives/java
ln: creating symbolic link `/etc/alternatives/java': File exists
[[email protected] alternatives]#ll
lrwxrwxrwx 1 root root 35 2009-06-04 23:38 jar -> /usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj/bin/jar
lrwxrwxrwx 1 root root 41 2009-06-04 23:38 jarsigner -> /usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj/bin/jarsigner
lrwxrwxrwx 1 root root 35 2009-06-05 16:52 java -> /usr/lib/jvm/jre-1.5.0-gcj/bin/java
lrwxrwxrwx 1 root root 37 2009-06-04 23:38 javac -> /usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj/bin/javac
lrwxrwxrwx 1 root root 39 2009-06-04 23:38 javadoc -> /usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj/bin/javadoc
lrwxrwxrwx 1 root root 37 2009-06-04 23:38 javah -> /usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj/bin/javah
ကျွှန်တော် အခု run ထားဒါက Fedora Core 7
fedora-ds-1.0.3-1.FC5.i386.opt.rpm packet ပါ.....
http က အလုပ်လုပ်နေပါပြီ.....
Directory Gateway ကနေ user information လဲဖြည့်လို့ရနေပါပြီ
ဒါပေမဲ့ database ကို management ဖို့အတွက် Directory console လိုလာပါတယ်...
[[email protected] fedora-ds]# ./startconsole -u admin -a http://our ip address
GC warning :13:ut of Memory ! Returning NIL!
အခုလိုဖြေပေးတဲ့အတွက် အစ်ကို Divinity ကို ကျွှန်တော် ကျေးဖူးတင်ပါတယ်ဗျာ....
Sorry ဗျာ ကျနော်အပေါ်က post မှာ သေချာမရေးမိဘူး။ JRE ကပါလာတဲ့ Fedora binary နဲ့မရဘူးဗျ။ Sun Java ပြန် install ရပါတယ်။ Sun ရဲ့ binary နဲ့မှရပါတယ်။ ကျနော်ဖြစ်ဖူးတုန်းကတော့ Sun JRE ပြန် install ပြီး /etc/alternative/java link ပြန် create လုပ်လိုက်တာရသွားတယ်။
လိုအပ်မယ်ထင်ရင် X windows လေးပါ update လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ
Good luck ဗျာ မရသေးရင်တော့ ....... :106::106::106:
Sun java ကို update လုပ်ကြည့်တယ် .....error တက်နေလို့ bro
မအားတဲ့ကြားက အကူအညီပေးတဲ့အတွက် အစ်ကို Divinity ကို
Sun site ကနေ JRE-xxxx.xx.rpm.bin ကို download လုပ်ပြီး Installation လုပ်ကြည့်ပါ။ download အဆင်မပြေရင်ပြောပါ။ တစ်နေရာရာမှာ upload ပြန်တင်ပေးမယ်ဗျာ။ JRE က 18Mb လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်
သူ့နကိုပါတဲ့ gij blah blah ကြီးနဲ့ကတော့ မရဘူးဗျ
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp မှာ download ချကြည့်ပါတယ်......
!!!!!!Your download transaction cannot be approved. Contact Customer Service.
ကျွှန်တော့်ကို download ချခွင့်မပေးဘူးဗျာ.....
register လုပ်ပါဆိုလို့ လုပ်လိုက်ပါတယ်.......
အကယ်၍ အစ်ကို Divinity မှာအခက်အခဲမရှိခဲ့ရင်.....upload တင်ပေးရင်တော့
ပြောတဲ့အတိုင်းဘဲဗျ.....ဒါပေမဲ့ download မရတာတော်တော်ဆိုးတယ် bro....
အစ်ကို upload တင်ပေးဖို့လွယ်ခဲ့ရင်.......http://www.fileqube.com/ ဒီနေရာလေးမဆိုးဘူး bro
50 MB ရတယ် သုံးရတာလည်းလွယ်တယ် bro......
ကျွှန်တေ့်ကို အကူအညီပေးတဲ့အတွက် ကျေးဖူးတင်ပါတယ် ဗျာ........
Download က ဖြစ်တယ်။ Upload သာ နဲနဲသည်းခံရမယ် းD
Jre5ကိုများ download လို့လား။ register ရတယ်ဆိုလို့
32 bit , 386 platform. JRE6, rpm.bin binary?
အစ်ကိုရာ ကျွှန်တော်လည်းအခုမှ ၀င်ဖြစ်တယ်.....
ကျေးဖူးတင်တယ် bro ....
upload လုပ်ရတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်ဗျာ.....
ကျွှန်တော်လုပ်ကြည့် လိုက်ဦးမယ် ဗျာ...
connection ကမကောင်းလို့ မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်......
gmail address လေးရှိရင် သိပါရစေဗျာ....
အစ်ကိုလို ဆရာသမားမျိုးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လို့ပါ....
အဲလိုပြောတော့ နောက်တလိုလို တောင်ဖြစ်တယ် :P:P:P
မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကျနော်ဖြစ်ဖူးတယ်။ ကျနော့တုန်းက JRE ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါလေးပြန်ပြောပြတာပါ။ :67::67:
ကိုဖြိုးမင်းဝေ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးနော်။ တော်ကြာ solution ကမှားနေရင် ငါ့ကို 18MB download အကြီးကြီး လာလုပ်ခိုင်းတယ် ဆိုပြီး :14:စိတ်ဆိုးနေရအုန်းမယ်။
Fedora 10 ကို ဘာလို့ မသုံးလဲ မသိဘူးနော်၊ အဲဒီ Fedora6တို့7တို့တုန်းက ကျနော်လဲ အဲဒီ SUN JRE install လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး manually လုပ်ရသေးတယ်၊ အဲဒုန်းက စသုံးခါစမို့လား မသိဘူး သူများရေးတဲ့ scripts တွေကို copy & paste လုပ်ပြီး install လုပ်ရတာပဲ တစ်ခါတစ်လေ နားတောင်မလည်ဘူး ဘာတွေရေးထားလဲဆိုတာ .. ခုကတော့ Easylife တို့ Dangerous mouse တို့နဲ့ အဲဒီ essential packages တွေကို install လုပ်ရတာ Fedora မှာ ဘာမှကိုလုပ်စရာမလိုတော့လောက်အောင်ပဲ ..
Fedora7ကကြာနေပြီပဲ ခုထိသုံးတယ်ဆိုတော့ server ထိုင်ထားတာမို့လို့လား ..